Global Voices teny Malagasy » Syria: Edith Bouviez Frantsay Mpanao gazety, Naratra, Mbola Voafandrika Ao Homs Vita Fahirano · Global Voices teny Malagasy » Print
Syria: Edith Bouviez Frantsay Mpanao gazety, Naratra, Mbola Voafandrika Ao Homs Vita Fahirano
Voadika ny 29 Febroary 2012 7:48 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Medien Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Hetsi-panoherana Syria 2011 .
Mpanao gazety Tandrefana efatra tao aminà trano iray – noheverina ho azo antoka – tany Baba Amr, Homs, no nisy notafihan'ny tafiky ny fitondràna Siriana. Marie Colvin avy amin'ny American Sunday Times sy Remi Olchik Mpaka sary an-gazety frantsay no maty raha nidobohan'ny baomba ilay foibe vonjimaika natao hisy an'ireo mpanao gazety avy amin'ireo efa mahazatra sy ireo olon-tsotra mpampita vaovao. Ireo mpanao gazety roa sisa tavela, Edith Bouvier avy amin'ny Le Figaro sy Paul Conroy, Anglisy mpaka sary, dia naratra ary sisam-paty tamin'ilay fanafihana.
Ity lahatsary  somary mahery vaika ity (TANDREMO: VOTOATY HENJANKENJANA: Ilaina mba tsy ho taitaitra ny mpijery) dia mampiseho ny vatana kilan'ny afo tamin'ireo olona tao amin'ilay trano.
Ity lahatsary manaraka ity (TANDREMO: VOTOATY HENJANKENJANA: Ilaina mba tsy ho taitaitra ny mpijery) no voalohany indrindra tamin'ireo nivoaka tamin'ireo tranonkala fifampizaràna lahatsary, izay mampiseho an'i Bouviez sy Conroy. Nivoaka teny anivon'ny aterineto izy ity ny 22 Febroary, ny androtry ny nanaovan'ny fanafihan'ny tafi-panjakana ireo mpanao gazety roa ho lasibatra.
Ilay lahatsary dia sady mampiseho ireo tra-doza roa no ahitàna ihany koa ireo dokotera Siriana roa manoritsoritra ny fomab fitrangan'ny fanafihana. Ireo dokotera dia miresaka ny antsipirihany ara-medikaly mikasika ireo roa tra-doza, ny faharatsian'ny toeram-pitsaboana – noho ny tsy fahampian'ny fitaovana – ary niteny fanakianana mivaivay mamely ny fitondran'i Assad, izay miampanga ny mpanao gazety vahiny ho mpitsikilo.
Mpanao heloka bevava sy mpampihorohoro daholo va re izany ireo zazakely sy ireo mpanao gazety tsy manatsiny e?
Ireo no teny mahery manindrona avy amin'ireo dokotera roa – izay voatanisa ihany koa any anatinà lahatsary hafa ho toy ny mpitsabo Afaka avy amin'ny Tafika Siriana.
Naneho firaisankina goavana noho ilay fanafihana ireto mpanao gazety ireto izao tontolo izao, ary niely be ny lahatsary nampiseho n y ratra nahazo azy ireo ao amin'ny Youtube sy Facebook. Tsy ela dia voadika tamin'ny teny Arabo, Frantsay ary Anglisy ireo lahatsary, mba hilazàna amin'izao tontolo izao ny habibiana mitranga ao Syria
Ny ampitson'ilay fanafihana, 23 Febroary, nipoitra ny lahatsary vaovao hafa nampiseho an'i Bouviez Conroy indray mandeha indray tao amin'ny YouTube. Niely be indray koa ireo lahatsary narahanà mpijery efa ho an'hetsiny maro teny anivon'ireo tambajotram-baovao sosialy ary voadika aminà tenim-pirenena marobe mihitsy aza, isan'izany ny teny Koreana.
Conroy eto dia miresaka momba ilay fanafihana sy ny ratrany :
Raha i Bouviez kosa indray mitantara amin'izao tontolo izao ny ratrany ao amin'ity lahatsary ity [fr]:
Ny ankamaroan'ireo lahatsary mitete avy ao Syria dia saiky finday avokoa no nandraketana azy. Ny tena tompon'ny lahatsary tahaka izany dia matetika no saro-tadiavina satria an'anarivony amin'ireo mpampiasa Youtube no matetika mampiasa io fpmba io hizaràna amin'izao tontolo izao ny momba ny heloka an'ady ataon'ny fitondrana Siriana.
Ireo mpiondana aterineto, isan'ireny ny mpampiasa ny Twitter manerana izao tontolo izao, sia naneho avokoa fanohanana ireo mpanao gazety roa ireo. Ny kaonty Twitter an'i Bouviez – @danslesrues  dia naharay bitsika fanohanana an-jatony aminà tenim-pirenena samihafa, izay naverina nalefa indray sy nomarihana ho toy ny ankafizina.
@LyraMckee : Mirary soa. Mbola mila mpanao fanadihadiana mahavita azy izahay. Ianareo no iray amin'ireny. Manàna fanantenana; mbola betsaka ny asa goavana miandry anareo.
Teboka iray mila havoitra, na izany aza, ny hoe i Bouviez dia tsy nandefa bitsika mihitsy hatramin'ny 27 Janoary. Ary, hatramin'ny 22 Febroary, izany hoe ny andron'ny fanafihana, ny kaonty twitter-ny dia nanomboka naharay bitsika mivantana na naverina nalefa efa ho ampolony isan'andro, tsy misy na iray aza amin'izy ireny ka hoe azy.
Androany, ny manampahefana Frantsay dia nanamafy fa i Conroy dia navoaka tao Homs ary nalefa any Libanona raha i Bouviez kosa mbola voafandrika any Homs vita fahirano ihany.
Nahatohina ireo mpiondana aterineto maneran-tany ireo habibiana any Syria noho ny fiakatry ny fahafatesan'olona. Hatramin'ny anio, efa nihoatra ny 8.000 no isan'ny namoy aina tao Syria.
Ao amin'ny YouTube, MaximilienWolfgang dia mizara ny fomba fiheviny mikasika an'i Syria.
Teo ambany famoretana hetsi-panoherana avy amin'ny governemanta hatrany i Syria tato anatin'ny taoan iray teo ho eo. Mitatitra ireo ONG fa ampolony ireo olona maty isan'andro manerana ny firenena. Voafehifehy ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety satria kely dia kely ny vaovao mivoaka avy ao amin'ny firenena.
Omaly ny Kaomity Miaro ny Mpanao Gazety dia nitatitra  ny fahafatesan'i Anas al-Tarsha, 17 taona, mpiondana aterineto maty tsy tra-drano teo am-pandraketana an-tsary ny fandarohana baomba tao Qarabees, distrika iray ao Homs nandritra ny fanafihana mahery vaika, tamin'ny fitontonan'ilay zava-mipoaka teo aminy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/29/29454/